Akụkọ mkpirisi, ihe zuru oke iji mepụta ihe edemede | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akụkọ mkpirisi: ihe ha bụ, njirimara na otu esi ede otu
John Ortiz | | akụkọ sayensị emeghị eme, ụdịdị, Akwụkwọ, Akụkọ
Akụkọ mkpirisi bụ akụkọ dị mkpirikpi nke a na-ekwu okwu banyere otu isiokwu. N'ozuzu ha, ha enweghị oke na isiokwu kwesịrị ekwesị ma site na akụkọ ifo na ederede nke na-atụ aro ma ọ bụ na-adịghị ahụkebe. Micro-akụkọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-adaberekarị n'okwu ma ọ bụ nkọwa nke ike dị egwu.
N'ọnọdụ ọ bụla, isi ihe abụọ dị n'ime akwụkwọ edemede a bụ mmalite na nkenke. N'ụzọ nke a, akụkọ mkpirisi ga - enwe ikike iju onye na - agụ ya anya (ma ọ gaghị abụ akụkọ “a ga - echefu echefu”). Nke ahụ bụ, onye ode akwụkwọ ga-enwerịrị ikike ịmachi ndị na-ekiri ya site na nke mbụ ruo na nke ikpeazụ.
1 Njirimara nke obere akụkọ
1.1.1 Mbelata nọmba
1.3 Ọ bụ "akụkọ n'ime akụkọ ọzọ"
1.4 Dị nghọta
2 Storiesdị akụkọ
2.1 Ezigbo akaụntụ
2.2 Akụkọ dị egwu
3 Aro maka ide obere akụkọ
3.1 Gụọ ọtụtụ akụkụ nke ụdị a
3.2 Nanị ilekwasị anya n'ihe omume ndị a ga-akọ
3.3 Jiri nlezianya họrọ nhọrọ nke ndị odide
3.4 Structured nkwupụta nke eziokwu
3.5 Mbido na-awụ akpata oyi n'ahụ, mmechi echefu echefu
3.6 Nhọrọ nke Onye Nkọ
3.7 Ihe ijuanya dị na nkọwa
3.8 N'ikpeazụ, aha
Njirimara nke obere akụkọ
Àgwà ndị a kọwara obere akụkọ:
O doro anya, obere akụkọ enweghị otu ohere iji kọwaa nkọwa nke gburugburu ebe obibi ma e jiri ya tụnyere ụdị edemede ndị ọzọ (dịka akwụkwọ akụkọ, dịka ọmụmaatụ). Enweghikwa ebe ị ga-ewebata ihe odide ahụ n'ụzọ miri emi na enweghị oge iji tụgharịa uche na mkpali ha. N'ihi ya, mmepe nke akụkọ a na-eme ka ọ dị elu.
A obere akụkọ mgbe nwere ihe karịrị atọ odide, na-abụkarị ndị na-akọ eri na-ebu site na discursive monologue nke protagonist. Na consecuense, na micro-akụkọ ọ dịghị oge "ịtụgharị uche" na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ maka ọtụtụ twists na ibé (Enwere ike naanị otu, na njedebe).
Obere akụkọ na-amalite na-enweghị gloating ma ọ bụ "elu elu" nkọwa; ihe a na-aga na isi. N'echiche a, ntinye nke ụdị ederede a na-abụkarị atụmanya nke oge dị egwu ma ọ bụ akụkụ nke esemokwu. N'ezie, a na-eji micro-akụkọ kacha mma eme ihe site na iji ohere na ịbawanye mmetụta ma ọ bụ echiche emere n'ihu ma jigide ya rue mmechi.
Ọ bụ "akụkọ n'ime akụkọ ọzọ"
Esemokwu dị oke mkpa nke akụkọ dị mkpirikpi sitere n'aka ndị edemede site na iji ụda. N'otu oge ahụ, usoro di omimi nke ihe omume choro ichikota ego nke ozi ezigara. Ihe kpatara ya bu ihe di mfe: ebum n’uche bu ime ka obi di onye ogugu a nma “njuputa” nke akuko nke na-abawanye.
A na-akọkarị akụkọ mkpirikpi n'ime akụkọ okwu. A na-ahụ nke a nke ọma na micro-akụkọ edepụtara na onye mbụ. Ndị a yiri nkwupụta, ntiwapụ ma ọ bụ eserese dị elu nke protagonist.
Dị ka aha ya pụtara, ọ bụ akụkọ dị mkpirikpi sitere na eziokwu nwere ike ime. Ya mere, arụmụka ya na-amalite site na nchọpụta anya nke otu gburugburu ma ọ bụ site na ezigbo nyocha. Agbanyeghị, ọ bụghị iwu na ị ga-ede akwụkwọ akụkọ tupu oge ahụ. Otu n'ime ụdị akụkọ akụkọ a na-ahụkarị bụ ndị uwe ojii, nke a na-egosi onye na-agụ akụkọ akụkọ gbasara mpụ.
Akụkọ dị egwu
Ha bụ ndị ahụ ebe a na - eme ụdị ihe omume niile na - emeghi eme, (n'ezie, ihe agaghị ekwe omume na / ma ọ bụ mkpụrụedemede dị ka a ga - asị na ha dị adị n'ezie). Ozo, enwere micro-akụkọ nke meta-akụkọ ifo ihe omuma na okike. Ihe ndị a dabere na akụkọ ihe mere eme, ọ bụ ezie na ha nwere atụmatụ nke onye edemede ahụ mepụtara ma ọ bụ mebie ya kpamkpam.
Aro maka ide obere akụkọ
Gụọ ọtụtụ akụkụ nke ụdị a
E nwere ọtụtụ ndị ode akwụkwọ bụ ezigbo ndị isi nke akwụkwọ edemede a, ha bụ akwụkwọ kachasị mma mgbe ị na-ede obere akụkọ. N'ime ndị nnukwu aha n'asụsụ Spanish bụ Soledad Castro, Julio Cortazar, Jorge Luis Borges, Mario Benedetti, Julio Ardiles, Vicente Huidobro na Gabriel García Márquez.
Nanị ilekwasị anya n'ihe omume ndị a ga-akọ
Bụ ụdị akụkọ, ma bụrụ akụkọ siri ike, ọ dị mkpa iji nlezianya họrọ nke amaokwu nwere ezi mkpa n'ime a ibé. Otu n'ime ụzọ ị ga-esi ruo ebe a bụ ịga site na macro gaa na micro, ihe dịka "nchịkọta nke nchịkọta". Obi abụọ adịghị ya na a hapụrụ ha.
N'otu oge ahụ, ị nweghị ike ịhapụ ụfọdụ ihe dị oke mkpa n’ihi na ọ na-eme ka akụkọ ahụ dum bụrụ ihe na-enweghị isi. Ya mere, ịkọwapụta obere akụkọ dị mkpirikpi bụ nguzozi zuru oke n'etiti nnukwu ozi - nke ekwuru n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ nghọta - na obere oge enwere ike.
Jiri nlezianya họrọ nhọrọ nke ndị odide
Mgbe akụkọ dị mkpirikpi nwere mkpụrụ edemede abụọ ma ọ bụ atọ, ndụmọdụ bụ ịkọwa ọdịiche ha nke ọma. Otú ọ dị - ebe ọ bụ na enweghị ohere maka nkọwa zuru ezu- isi ihe kwesiri igosi ya na okwu ole na ole (ihe pere aka nke oma). N’ebe ndị a, enwere ike iji ọdịiche dị n’etiti mkpụrụ edemede mee ka onye na-agụ ya chee ma ọ bụ nwewe obi abụọ.
Structured nkwupụta nke eziokwu
Nnukwu nzukọ dị mkpụmkpụ nke akụkọ dị mkpirikpi anaghị ahapụ ya igosi ndị na-agụ ya ihe ndị bụ isi:
Ntinye (okwu mmalite)
N'ezie, akụkụ nke ọ bụla n’ime akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a na-abụkarị otu ahịrịokwu ma ọ bụ abụọ ma ha na-ebu usoro usoro oge ha si mee. Ma ọ bụghị ya, ihe ize ndụ nke ịkọkọ akụkọ a na-apụghị ịghọta aghọta buru nnọọ ibu.
Mbido na-awụ akpata oyi n'ahụ, mmechi echefu echefu
Mmalite kwesịrị ịdọrọ uche onye na-agụ ya ka o kwere mee. N'ihi ya, ọnụ ụzọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ma na-adọrọ mmasị. N'otu aka ahụ, ntụgharị ikpeazụ na-anọchite anya ohere ịhapụ onye na-ekiri ya na ụjọ. Iji mezuo mmetụta abụọ ahụ, ọ dị mkpa iji nlezianya hazie ma họrọ ihe ọmụma egosiri na akara ọ bụla nke ederede.
Nhọrọ nke Onye Nkọ
N'ihi nkenke ederede, enwere naanị ohere maka otu onye na-ede akụkọ. N'echiche a, ndị kachasị adaba maka obere akụkọ bụ isi onye na-akọ akụkọ na onye maara ihe niile. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị onye na-akọ akụkọ na-enye ohere ụfọdụ egwuregwu na asụsụ nke dabere na mmalite nke onye edemede.
Ihe ijuanya dị na nkọwa
N'agbanyeghị oke oke dịnụ iji weghara ụfọdụ nkọwa, ọ bụ ihe amamihe dị na ịghara ime na-enweghị ha kpamkpam. Na nke a - ọzọ - ikike onye ode akwukwo nwere ighota ihe di nkpa ime ka nkowa ndia di nkpa maka nkwekọ nke akụkọ ahụ. Na mgbakwunye, isi ihe ndị ahụ nwere ike ịbawanye ohere gị ịnweta njedebe dị egwu.
Mgbe ejiri nlezianya gbasie ike, nyochaa ma dezie ọdịnaya… oge eruola inye ederede aha. N'oge a, Ndụmọdụ bụ ịga maka isiokwu na-adọrọ mmasị, na-atọ ụtọ ma na-akpali echiche. E kwuwerị, otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara akụkọ dị mkpirikpi kwesịrị ịdịrị n'uche onye na-agụ ya: aha ya na echiche ya ma ọ bụ nchegbu ọ rụpụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Akụkọ » Akụkọ mkpirisi: ihe ha bụ, njirimara na otu esi ede otu
Edemede mara mma, ọ bụ ezigbo ndu.
Alberto Paz kwuru dijo
Naanị m gụrụ "The light of nostalgia and other stories" nke Miguel Angel Linares dere. Akwụkwọ nke obere akụkọ, aphorisms na nkebi ahịrịokwu a tụrụ aro. Ezigbo ịhụnanya na melancholic. Akwadoro ndị na-amasị obere akụkọ.
Zaghachi Alberto Paz
Ajụjụ ọnụ a na Patricia Pérez na Julio Santos, ndị okike nke Txano na Óscar